Derjada-ruuxi qiimaynta aragti of Asia Prefecture
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Derjada-ruuxi qiimaynta aragti of Asia Prefecture
Qaramada Asia Prefecture qiimaynta aragti eegay xagga ruuxa bari doonaa adeegga suurto gal. appraisers iyo adeegyada soo bandhigay halkan
waa mid kooban macluumaadka Ujeedada on shabaqa, waxa aanu qasab leeyihiin qiimeynta, sida togan iyo kuwa taban. In la xasho ku handmade
◆ "la arki karo"
Kawagoe City, Asia Prefecture Shintomicho waa xasho ah. Sida dukaamo u hesho in ay qiimaynta litchi in xasho ah, ku meel gaar ah u noqdaan mawduuc kulul, waxa ay noqotay in articles badan oo badan oo ay wararka warbaahinta iyo sida. qiimaha
waa heer in aysan waxba ka beddelin badan xitaa marka la barbar dhigo 30 daqiiqo 4500 yen sababtoo ah waa 150 yen halkii daqiiqo, la isku qurxiyo guud maal-sheegistii, iwm .. waqti qiimaynta sidoo kale qaadanayaa ilaa 30 daqiiqadood ee gaaban ah.
waa waqti dheer ka hor ay ahayd 100 yen halkii daqiiqo, laakiin Rose ah, waa qayb ka mid ah ay calaamaddu ku-ups waxaa deeq in Japan Guide Dog ururka, xayawaan qashin booliiska gargaar u dhiska eber-dhulgariirkii iyo wixii la mid ah.
Waxa intaa dheer in qiimaynta aragti ruuxiga ah, sidoo kale iibiya sida jijin Power Stone, waxaad talo dooran karaa mid ka mid ah in uu ahaa in gobolka ee macaamiisha ah ee nafta.
page guriga waxay leedahay "Waxaan aqbali Boos kasta saddex bilood hadda," laakiin, tani waa mid aan khalad ah "saddex bilood ka hor", hit waa la garanayn. Fadlan haddii aad tahay baaritaan isku day xiiso on adiga kuu gaar ah.
in dadka qaba waxbarashada mustaqbalkiisa sida 5 sano Miko in Aomori, iminka waxaan nahay jinni saarista iyo khabiir aragti ruuxiga ah ee Tokyo, Asia, Chiba, Ibaraki, Gunma. Ruuxa naafada ah wada tashiga ayaa sidoo kale aqbalay. Consultation on baabuurta loo isticmaalo waqtiga iibsiga iyo guryaha iin nafsi (guryaha Iwakutsuki) u muuqataa in dad badan oo.
lacagta waa 5000 yen mar. Haddii in ka badan 2 saacadood waa in in la xisaabiyaa by 1000 yen, laakiin mid ka mid ah waa la garanayn waxa lagu daray 1000 yen tiro kasta oo daqiiqo. Taas oo uu sheegay
, sidaa darteed waxaad ka akhrisan kartaa iyo wixii la mid ah 5000 yen ilaa laba saacadood ilaa meel ku akhri description ee goobta, waxaa dhihi lahaa set arrin ogsoon haddii.
◆ XAFIISKA HANABUSA
Hiroshi maalmhan, kuwaas oo in ka badan khibrad ruuxi ah laga soo bilaabo yaraantooda Hiki-qori, bogsiinta ruuxa Asia Prefecture in Ogawa, Annagu waxaannu nahay talinta ruuxiga ah . lacag
ee la talinta xagga ruuxa waa 1 saac 10000 yen, waa in of 2 Tsude ah oo ku saabsan 30 daqiiqo su'aalo, isagoo ah hanuuniye.
Hiroshi maalmhan, kuwaas oo in ka badan khibrad ruuxi ah laga soo bilaabo yaraantooda Hiki-qori, bogsiinta ruuxa Asia Prefecture in Ogawa, waa la talinta xagga ruuxa. lacag